Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo maalinta berri ah hortagi doonno baarlamaanka Soomaaliya - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo maalinta berri ah hortagi doonno baarlamaanka Soomaaliya
Ra’iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu hortago baarlamaanka Soomaaliya, si codka kalsoonida ah loogu qaado.
Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalinta berri kalfadhigoodii koowaad ku yeelan doonna xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa markii la siiyo codka kalsoonida ah, waxaa laga sugayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumeeysa shacabka Soomaaliyeed.
Qorshaha ayaa hore u ahaa in maalinta Khamiista ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre la horgeeyo baarlamaanka, si codka kalsoonida ah ay ugu qaadaan, balse waxaa la sheegayaa in madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo uu codsaday in maalinta berri loo badalo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maalinta berri ah furo kalfadhigii koowaad ay yeelan doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha baarlamaaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku wargeliyay xildhibaanada baarlamaanka inay kasoo qeyb-galaan kalfadhiga koowaad uu maalinta berri ah baarlamaanka uga furman doonno xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore uga dalbaday xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay codka kalsooni ah siiyaan ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, isagoona ku dooday inuu yahay qof ay wada shaqeyn karaan islamarkaana uu si weyn ugu kalsoon yahay inuu shaqadaan kasoo bixi karo.